HIM | Health in Myanmar » STDs Basic လိင်မှတဆင့် ကူးစက်သောရောဂါများ အခြေခံ (၂)
လိင်ကတဆင့် ကူးစက်တဲ့ရောဂါတွေကို အခု Sexually Transmitted Diseases (STDs) နဲ့ Sexually Transmitted Infections (STIs) လို့ခေါ်ပါတယ်။ အရင်ကတော့ Venereal Diseases (VD) လို့ ခေါ်ခဲ့လို့ မြန်မာပြည်မှာ ကာလသားရောဂါလို့ ခေါ်ခဲ့ပြီး၊ ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး ဌာနတောင် ဒီနာမယ်နဲ့ လုပ်ခဲ့သေးတာ။ ကာလသားဆိုတာ လူပျိုပေါက်ထက်ကြီးပြီး၊ အိမ်ထောင်မကျသေးတဲ့ ယောက်ျားလေး လူရွယ်တွေကိုခေါ်တယ်။
ကာလသားတွေသာ မဟုတ်ပါ၊ မွေးစကလေးတွေကိုကူးတယ်။ ကာလသမီး၊ အမျိုးသမီး၊ မင်းသမီးတွေမှာပါဖြစ်တယ်။
1. Paris Hilton ပဲရစ် ဟယ်လတန် = လိင်လမ်းရေယုံ
2. Jasseca Alba ဂျက်ဆီကာ အယ်လ်ဘာ = လိင်လမ်းရေယုံ
3. Britney Spears ဘရစ်တနေ စပီးယား = လိင်လမ်းရေယုံ
4. Jessica Biel ဂျက်ဆီကာ ဘီးလ် = လိင်လမ်းရေယုံ
5. Kristanna Loken ခရစ်တန်နာ လိုလင် = လိင်လမ်းရေယုံ
6. Victoria Becken ဗစ်တိုရီယာ ဘက်ခမ် = လိင်လမ်းရေယုံ
7. Julia Sweeney ဂျူလီယာ ဆွမ်နေး = HPV လိမ်းလမ်းကြွက်နို့
Venereal လို့ ခေါ်တာကလဲ Venus ဗီးနပ်စ် ကနေလာတာပါ။ ကျောင်းသားတွေက သောကြာဂြိုဟ်လို့ သင်ကြရမယ်။ စာဖတ်သူများကတော့ ဗီးနပ်စ်ကို အချစ်နဲ့ အလှကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ ရောမနတ်သမီးလို့ သိကြမယ်။
ရောမသာမကပါ၊ ဂရိနတ်သမီး အဖရိုဒိုက်နဲ့ပါ ဆက်စပ်မှုရှိသေးတယ်။ လှလွန်းတယ်လို့ နာမည်ကြီးတဲ့ လက်နှစ်ဖက်ပြတ် ကျောက်ဆစ် ရုပ်ထု Aphrodite of Milos ကို Venus de Milo လို့ ပိုသိကြတယ် မဟုတ်လား။ လှတာမက်တော့ ညစာခက်ဆိုသလို ရောဂါက အတော်ကိုကြောက်ဖို့ ကောင်းတယ်။
ဆေးတွေမပေါ်ခင်ကဆို ကုရာနတ္ထိရောဂါတွေလို့ ထင်မှတ်ခဲ့ရသေးတယ်။ စပိန်ပြည်တွင်းစစ် (၁၈၂ဝ-၂၃) ခေတ်ကတောင် ဒီရောဂါမျိုးဟာ ရန်သူ့ကျည်ဆံလို ကြောက်ဘို့ကောင်းတယ်လို့ ပိုစတာတွေကပ်ခဲ့ကြသေးတယ်။
(၁) Chlamydia trachomatis ပိုးတွေကြောင့်က အဖြစ်အများဆုံးလို့ ပြောနိုင်တယ်။ (ကလာမိုင်ဒီးယား) အဖြစ်များဆုံး STD ကို ရေးထားပါတယ်။
(၂) Gonorrhea ဂနိုရီးယားက ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်တယ်။ ရေးထားပါတယ်။
(၃) Syphilis ဆစ်ဖလစ်ကိုလည်း ရေးထားပါတယ်။
(၄) Genital herpes လိင်လမ်းရေယုံကိုလည်း ရေးထားပါတယ်။ ရေယုံဆိုတာ ကိုယ်ခန္ဓာမှာ ဖြစ်တာတမျိုး၊ ပါးစပ်တဝှိုက် ဖြစ်တာတမျိုး။ လိင်လမ်းမှာလဲ ဖြစ်သေးတယ်။ (HSV-2) ဗိုင်းရပ်စ်ကနေဖြစ်တာ။ အရည်ကြည်ဖုတွေဖြစ်တယ်၊ နာတယ်၊ ယားတယ်။ မွေးလာမယ့်ကလေးကိုကူးနိုင်တယ်။
(၅) ဗဂျိုင်းနားရောင်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ (၃) မျိုးထဲမှာ(ဂါ့ဒ်နီရဲလား ဗဂျိုင်နိုက်တစ်)နဲ့ (ကင်ဒီဒိုင်ယေးဆစ်) တွေက လိင်နဲ့ မဆိုင်ပဲ ဖြစ်ပေမဲ့ (ထွိုင်ကိုမိုးနပ်စ်) ကတော့ လိင်ကနေကူးစက်တယ်။
(၆) Chancroid ရှန်ကာ ဆိုတာဖြစ်ရင် လိင်အင်္ဂါမှာအနာ၊ အကျိတ်ပေါ်လာမယ်။ ပေါင်ခြံကအကျိတ်တွေရောင်လာတယ်။
(၇) LymphogranulomaVenereum (LGV) ဆိုတာက တက်စေ့တွေ ရောင်တာပါ။ လိင်အင်္ဂါမှာမနာတဲ့အနာဖြစ်လို့ ဆစ်ဖလစ်နဲ့ မှားတတ်တယ်။
(၈) Genital Warts လိင်အင်္ဂါကြွက်နို့ကိုလည်း ရေးထားပါတယ်။ Human Papillomavirus (HPV) လိင်လမ်းကြောင်း ကြွက်နို့ကနေတချိန်မှာသားအိမ်ဝကင်ဆာ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
(၁ဝ) HIV/AIDS ကိုလည်း အများကြီးရေးထားပါတယ်။
Pubic Lice သန်း။ Parasites ပါရာဆိုက် ခေါ်တယ်။ ဆီးစပ်မွှေးမှာလဲ ဆံပင်တွေမှာလို သန်းတွေ ရှိနိုင်တယ်။ ပုံစံမတူတတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် Crabs ခေါ်တယ်။ ယားမယ်။ ဥတွေအုချတယ်။ ပွါးမယ်။ ကူးမယ်။
Pelvic Inflammatory Disease (PID) တင်ပါးဆုံတွင်းအင်္ဂါများရောင်ခြင်း။ လိင်ကတဆင့်ကူးတာဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်။ အသေအခြာဆေးမကုရင် အမျိုးမီးမှာကလေးမရတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ဗိုက်အောက်ပိုင်းနာနေမယ်။
ကိုယ်ပူမယ်။ ဆက်ဆံရင် နာမယ်။ ဆီးအောင့်မယ်။ ကြားရက် သွေးဆင်းမယ်။ လိင်ကတဆင့်ကူးစက်ရောဂါလဲဖြစ်နိုင်တယ်။ ဆက်ဖြစ်၊ ထပ်ဖြစ်ရာကနေ အတွင်းအင်္ဂါတွေ (သားအိမ်ဝ၊ သားအိမ်၊ သားအိမ်ပြွန်၊ မျိုးဥအိမ်နဲ့ အတီးအတားကနေရာတွေ) ရောင်တာ ဖြစ်တယ်။ Chlamydia နဲ့ Gonorrhea ကနေလည်းဖြစ်စေတယ်။ ဆီးစပ်နေရာနာမယ်။ တခုခုဆင်းမယ်။ (PID) အမျိုးသမီး တင်ပါးဆုံတွင်းအင်္ဂါများရောင်ခြင်းကို ရေးထားပါတယ်။
STDs ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။ လိင်မဆက်ဆံဘဲနေပါလို့ပြောတာ အမှန်ဆုံးဘဲ။ လက်တွေ့မကျလို့ အကြံကောင်း ပေးတာကိုလိုက်နာပါ။ အဖေါ်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမေးပါ။ ဆေးစစ်ကြပါ။ (ကွန်ဒွမ်) အမြဲသုံးပါ။
လက္စဏာရှိရင် မြန်မြန် ထိထိရောက်ရောက် ဆေးကုပါ။ (ကွန်ဒွမ်) ကနေအကုန်လုံးကိုမကာကွယ်နိုင်ပါ။ (ကွန်ဒွမ်) ကနေ Gonorrhea, Chlamydia, HIV နဲ့ Trichomoniasis တွေကိုတော့ ကောင်းကောင်း ကာကွယ်နိုင်တယ်။ Herpes, Syphilis နဲ့ Genital warts တွေကိုတော့ ကောင်းကောင်း မကာကွယ်နိုင်ပါ။ (ကွန်ဒွမ်) မဖုံးတာကိုတော့ မကာကွယ်နိုင်ပါ။ Crabs နဲ့ Scabies တွေကို လုံးဝမကာကွယ်နိုင်ပါ။
အများစုရောဂါတွေက တခါဖြစ်ပြီး၊ ရောဂါပြီးသွားသလို မဖြစ်စေနိုင်ပါ။ ဂနိုးရီးယား၊ ဆစ်ဖလစ်၊ ကလာမိုင်ဒီးယားနဲ့ ထွိုင်ကိုမိုးနပ်စ်တွေကို ဆေးကုရင် ရှိနေတာတွေကောင်းသွားမယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ထပ်ဖြစ်ရင် နောက်တခါ ဆေးထပ်ကုရလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ကဆေးကုပေမဲ့ အဖေါ်ကဆေးမကုရင် ပြန်ကူးလာမယ်။
- Chlamydia (ကလာမိုင်ဒီးယား) အဖြစ်များဆုံး STD http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/chlamydia-std.html
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ - STDs Basic လိင်မှတဆင့် ကူးစက်သောရောဂါများ အခြေခံ (၂)
စိတ်ဖိစီးမှုများရင် လျှာအဖုတွေကကြီးလာတယ်ဗျ လူတိုင်းမှာရှိပါတယ်
ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမမေးခင် အရင်တောင်း ပါတယ်ဆရာ....။ ဆရာခင်ဗျာ ကျွန်တော်က တာချီလိပ်ဘက်မှအိမ်ထောင်ကျနေပါတယ်။ ဇာတိကနေပြည်တော်ကပါ။ ဘ၀ကိုရိုးသားစွာ နေထိုင်သူပါ။ ကျွန်တော် အရက်၊ ကွမ်ယာ၊ ဆေးလိပ်လည်းမသုံပါဘူးဆရာ။ ကျောင်းတက်နေတုန်းကတော့ သိထားဖို့အတွက် တစ်ကြိမ်တစ်ခါ စမ်းဖူးပါတယ်။ မူးရစ်အကြီးစားတွေအခုအချိန်ထိ မသုံးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လွန်ခဲ့နှစ်လလောက် က လင်မယားအနည်းငယ် ကမောက်ကမဖြစ်လို့ နေပြည်တော်ကို ပြန်ခဲ့သေးပါတယ်။ ပြန်မရောက်ပြီး နှစ်ရက် သုံးရက်မှာ ကျွန်တော့
ဘ၀တစ်ခုလုံး အခုအချိန်ထိတုန်လှုပ် ခြောက်ခြားနေပါတယ် ဆရာ။ ဘာဖြစ် လို့လည်းဆိုတော့ အဲဒိနှစ်ရက် သုံးရက်မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့စိတ်ပြေလက်ပျောက် လည်ဖြစ်တဲ့အချိန် ကေတီဗွိ၊ မာဆက် အကြောင်းတွေပြောကြတယ်။ ကျွန်တော်နေတဲ့ တာချီလိပ်ဘက်မှာ အပေါ်ဆုံးဖြစ်နေတာ တောင် စိတ်မ၀င်စား ဖူးပါဘူး။ ကျွန်တော့စိတ်ထဲမှမာဆက်အကြောင်းစွဲလာတယ်။ နောက်ရက် လည်ပက်ပြန်လာပြီးမှ မာဆက်အကြာင်သိချင်လို့ ည၁၂နာရီ လောက်အပြင်ပြန်ထွက်ပြီရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေကို လိုက်ရှာမိတယ်။ ဘယ်လိုရှာရှာမတွေ့ ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ပြန်တော့မယ်ဆုံးဖြက်ပြီမှ မှိန်ပြပြမီးလင်းနေတဲ့ တိုက်အိမ်တစ်အိမ်ကို ကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်။ တိုက်ရှေ့မှာဆို၈်ကယ်ကို ထိုးရပ်လိုက် ပါတယ်။ မာဆက်ဆိုတာ မသေချာမှာ ကြောက်လို့ မ၀င်ရဲပါဘူး။ လူတစ်ယောက်ထွက်လာပါတယ်။ ညီလေး အထဲမှာ ၂၀နှစ်အောက် ကောင်မလေးတွေ ရှိတယ် လာလေလို့ပြောတယ်။ လိုက်သွပါတယ်။ အခန်းတစ်ခန်းမှာထားခဲ့ပြီး ကောင်မလေးတစ်ယောက်ခေါ်လာပေတယ်။ မာဆက်ဆိုတာ နှိပ်ပေးတယ်ပဲသိထားတာ ပါ။ ဇိမ်ခံရင်မှိန်နေမယ်ပဲစိတ်ကူးမိတာ ငါးမိနစ်လောက် နှိပ်ပြီး ကော၈်မလေးက ပြောပါတယ် အကိုအချိန်ရှိတုန်း အလုပ်လုပ် ရအောင်ဆိုပြီး sex ကိစ္စကျူးလွန်မိတယ်။ စိတ်ထဲကမရည်ရွယ်ပေမယ် အခြေအနေကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်သက်လုံး ထိန်သိမ်းကာကွယ်ခဲ့တာ သားမယားအပေါ်မှာရော ကိုယ်ကျင့်တရား ကိုပါ သစ္စာဖောက်ခဲ့မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် လူယုပ်မာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ကျူးလွန်နေတဲ့အချိန်မှာအဖ်ာသုံးပါတယ် မသုံးဖူးတော့ တစ်မျိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ချွတ်လိုက်မိတယ်။ တစ်မိနစ်လောက်ပဲကြာ တယ် ပြီဆုံးသွားပါတယ်။ ပြီးသွာမှပဲ စိတ်ကထိန်းကနဲဖြစ်မိတယ် အေအိုင်ဒီအက်နဲ့ ကာလသားရောဂါတွေများ ကူးစက်သွားပြီလာလို့ စိုးရိမ်စိတ်ကြီးဝင်လာ တယ်။ မပြီးသေးဘူး အချိန်မပြည့်သေလို့ နောက်တစ်ခေါက် ထပ်ကျူးလွန်မိတယ် အဖော်နဲ့ပဲ့ အစအဆုံးကျူးလွန်ခဲ့တယ်။ စိတ်ထဲကလည်း ကြောက်လာမိနေလို့
အဖော်မချွတ်တော့ပါဘူး။ အားလုံးပြီးတော့ ခန္တာကိုယ်ကလည်တုန်နေပါတယ် စိတ်ကလည်း ကယောင်ခြောက်ခြားဖြစ် စိုးရိမ်နေပါတယ်။ ရောဂါတစ်ခုခုဖြစ်သွာပြီးလာပေါ့။ ဒါနဲ့ပဲ ရေအိမ်သွားပြီး ရေပြောင်အောင်ဆေး ဆီးသွားပြီး အိမ်ပြန်ခဲ့တယ်။ အိမ်ရောက်တော့ တစ်ခါရေအိမ်မှာ ဆပ်ပြာမှုန့်နဲ့ ရေဆေး ဆီးသွားပြီးအိပ်တော့ အိပ်မပြောတော့ပါဘူး စိတ်ထဲမှာရောဂါတွေဝင်နေပါပြီ ခန္တာကိုယ်မှာဝင်မ၀င်ကတော့အခုထိမသိသေးပါဘူး။ ချက်ချင်းပဲ အွန်လိုင်းပေါ်တက်ပြီး hiv / AIDS အကြောင်းတွေကို လေ့လာဖက်မိတယ်။ အစုံမဟုတ်သေး ရင်တောင် တော်တော် များများတော့သိနေပါ ပြီ။ ဘယ်လိုနေထိုင်စားသောက်ရမယ်ကအစ ပေါ့။ မနက်လင်းတော့ ကျွန်တော့ မိဘကအသေးစား နို့စားနွားမွေးပါတယ် ပါက်သက်သမျှ အလုပ်တွေကို နေပူမိုးရွာပုံမှန်လုပ်ပါတယ်။ စိတ်ကတော့ အလုပ်ထဲမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး ဆရာ။ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ မိုင်၃၀လောက် ခရီးကိုလည်း ခြေလျှင် နှစ်ရက်သွခဲ့တယ်။ နောက်ရက်တွေမှာဆီးသွားရင် သုပ်လိုမျိုးအရည်အနည်ငယ်ပါတယ်။ ဆီးသွားတိုင်းလည်း ပူစပ်ပူလောင် ကျင်တင်တင်ဖြစ်တယ်။ အနာအဆာမရှိသေးဘူး ဆပ်ပြာမှုန့်နဲ့ ဆေးထားလိုဖြစ်မယ်ဆိုပြီငြိမ်နေသေးတယ် အခုအချိန်ထိပဲ။ ဆီးသွားပြီမှလည်း သုပ်ရည်လိုမျိုးတွေပါလာတက်ပါတယ်။ နေပြည်တော်ဆေးရုံကဆရာဝန်တစ်ယောက်နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေခေါ်ပြီး အားလုံး သိအောင်လို့သွားပြီးဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒိလောက်ထိစုံအောင် မပြောဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ဆရာကလည် Hiv / AIDS အကြောင်းကိုပဲ ဦးတည်းရှင်းပြပါတယ်။ ညီဖြစ်ခဲ့တာတွေက ဖြစ်နိုင်တယ် မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ ပြောလို့တော့မရပါဘူးတဲ့ ကူးနိုင်ခြေက ၇၀ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ၃၀ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိပါတယ် လို့ြေ့ပာပါတယ်။ နောက်သုံးလနေရင် သွေးစစ်ကြည့် ရှိသည်ဖြစ်စေ မရှိသည်ဖြစ်စေ သိပ်မသေချာသေးပေမယ့် ၅၀ရာခိုင်နှုန်း သေချာပါတယ်လို့ပြော ပါတယ်။ နောက်ခြောက်လနေရင် တစ်ခေါက်ပြန်စစ်ပါ ပိုးရှိရင်ရှိတယ် မရှိရင်မရှိဘူး ၉၅% သေချာပါပြီလို့ပြောပါ တယ်။ ပြီးတော့ကျွန်တော့ကိုသေချာကြည့်ပြီးပြောပါတယ် ညီမှာအဲ့လိုရောဂါတွေရှိဘို့ ခံစားရဘို့ လက်ခဏာ မရှိဘူးလိုလည်း ပြောပါတယ်။ တစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ တာချီလိပ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ ကားနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါတယ် ရာသီဥတုကလည်းအရမ်းပူပါတယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ မိသားစုကိစ္စအဆင်ပြေပြီးနှစ်ရက်လောက်မှာ လင်မယားနှစ်ယောက် sex လုပ်ဖြစ်လိုက် တယ် နှစ်ရက်သုံးရက် တစ်ကြိမ်စီနေဖြစ် ပါတယ်။ အကာကွယ်သုံးဖို့အချိန်မရခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော်လူယုပ်မာ မဟုတ်ပေမယ့် လူယုပ်မာ ဖြစ်နေပါပြီ။ စိတ်ထဲကရောဂါတွေကလည်း မပျောက်ပါဘူး။ စားလို့မရ အိပ်လို့မရ ဟိုဟိုဒီဒီတွေဖြစ်နေပါတယ်။ အားလုံးကူစက်ကုန်ပြီးလားလို့ လည်း ပိုထင်လာမိတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နောက်အကြိမ်တွေမှာ အဖော်နဲ့ပဲ sexလုပ်ပါတယ်။ တစ်ပတ်လောက်ကြာလာတော့ ကျွန်တော့အင်္ဂါထိပ်မှာအဖုလေးတွေပေါက်လာပါတယ်။ လူပျိုတုန်းကလည်း ရာသီဥတုပူရင် ပေါက်တက်ပါတယ်။ ဆီးကတော့အောင့်စပ်စပ်ဖြစ်နေတုန်းပဲ နေပြည်တော်ကတည်းက အခုချိန်ထိ အရိအချွဲ တွေတော့ထွမလာတော့ဘူး။ ဆီးကအနီရဲရဲသွားပါတယ်။ မိုးအေးမိုရွာရင်တော့အကြည်သွားပါတယ်။ ဆေးရုံကဆရာဝန်ပြတော့ သွေစစ်ပြီး အပူကြောင့်ဖြစ်တာပါဆိုပြီး ဆေးတစ်လုံးထိုး စားဆေးသုံးရက်စာပေးပါတယ်။ အပူဖုလေးတွေတော့ ပျောက်သွားပါတယ်။ ဆီးအောင့်တာစပ်တာပူတာတွေမပျောက်ပါဘူး။ ဆီးလမ်းကြောင်းထိပ်လေးရယ် သူ့အပေါ်ကအပါက်ကလေးမှာ ပွန်းပဲ့နာလိုမျိုးနဲ့ သုပ်လိုမျိုးအနစ်တွေတော့ ရှိနေပါတယ်။ ဆီသွားပြီးပြောင်စင်အောင်ဆေးပြီးလည်ခဏဆိုရှိနေပြန်တယ်။ အခုဆိုထပ်ဆိုးလာပါတယ် ဝှေ့စေ့အောင့်တယ် ချိတ်ဆက်နေတဲ့အူလမ်းကြောင်းတွေရောင်တယ် ဆီးအိမ်ထွက်ကျလာမလိုခံစားရတယ်။ ဒူခေါင်းတွေ လက်တွေ လေးဘက်နာ ဒူလာသမားတွေလိုဖြစ်နေတယ်။ စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်မပါ အလုပ်လုပ်လို့မဖြစ်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ အားအင်ကုန်ခမ်းနေသလိုနေ့တိုင်ခံစားနေရတယ်။ နောက်ကျောတွေလည် လေထိုသလိုမျိုးအောင့်နေတယ် ပုခုန်းကြွက်သားတွေနာကျင်တယ် အဆစ်တွေကိုက်ခဲ့တယ် ပေါင်ကြော၊ ဇက်ကြောတွေလည်း သံချောင်းလို တောင့်တင်နေပါတယ်။ ဆီးပူညောင်းကျလား၊ ဂနိုလား၊ ဒူလာဖြစ်နေပြီလာလို့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာလေ့လာပါတယ် ဂနိုနဲ့ဆင်တူနေတာတွေ့ရပါတယ်။ ဂနိုဖြစ်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့မိန်မနဲ့အတူအတူဖြစ်တော့မယ်။ နောက် ကလေးကိုရော ပွေ့ဖက်နမ်းမိရင် ချီထားရင်ကူးစက်နိုင်ပြီလား။ လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ဝတ်စားဆင်မှုကနေ မိသားစုနဲ့ တစ်ခြားလူတွေကိုကူးစက်နိုင်သလားဆိုတဲ့သံသယတွေနဲ့ စိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ပဲ စိတ်ထိခိုက်နေမိပါတယ် ဆရာ။ အပစ်လုပ်မိတဲ့အချိနကနေအခုထိတော့ အသန့်ရှင်းဆုံးနဲ့ ဆင်ဆင်ခြင်ခြင်နေနေပါတယ်ဆရာ။ အခုပို့လိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေက အခုချိန်ထိ ဖြစ်နေဆဲအမှန်တွေမို့ အကူညီတောင်းခံမိတာပါဆရာ။ ဘယ်လိုရောဂါတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ ဘယ်လိုနေ ဘယ်လိုထိုင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ဖြစ်နိုင်တဲ့ရောဂါတွေနဲ့ လက်ခဏာတွေ နေထိုင်ဆင်ခြင် ရှောင်ကျင်ရ မှာတွေကို ကူညီဖြေရှင်းပေးစေချင်ပါတယ်ဆရာ။ ကြာကြာမက်တက်ရပ်အလုပ်လုပ်ရင် ခါးနဲ့ဆီးခုံတွေအောင့်တယ်။ ဒူးချောင်ပြီးညောင်းညောင်းနေပါတယ်။ ဒီနေ့မနက် လျှာမှကြည့်လိုက်တော့ ဘယ်ဖက်ရောညာဖက်ပါ အရင်းနားမှာကွဲနေပါတယ်။ အာသီးအောက်နား လျှရင်းမှာလည်း အဖုတွေကိုပါတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ အရမ်း စိုးရိမ်စိပ်ဝင်လာလို့ ဘာမှလုပ်လို့မရအောင် တုန်လှုပ်နေပါတယ်။ ကူညီပြီးဖြေရှင်းပေး ပါဦဆရာ။
မက်ခရုဆိုတာဘယ်လိုပုံစံလည်း မသိပါဘူးဆရာ။ နားလည်တက်ကျွမ်းတဲ့ ကျန်းမာရေးဌာနနဲ့ဆွေးနွေးလို့ရနိုင်ရင် ဖုန်နံပါတ်လေးပါ တင်ပေးစေလိုပါတယ်ဆရာ။